घर बाट काम | Ebuno
सशुल्क सर्वेक्षणको साथ घरबाट काम गर्दै
भुक्तान गरिएको सर्वेक्षणसँग अनलाइन काम गर्नु सजिलो काम हो जुन तपाईंसँग गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईंसँग अतिरिक्त समय बाँकी हुन्छ। तपाईं जहाँसुकैबाट पनि इन्टरनेट नभएसम्म सर्वेक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं ओछ्यानमा पल्टन सक्नुहुन्छ र प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ, बसमा बस्नुहोस् वा वास्तवमै कहिँ पनि र कुनै पनि समयमा।
सशुल्क सर्वेक्षणको साथ किन काम गर्ने?
यससँग काम गर्न किन राम्रो छ सशुल्क सर्वेक्षण अनलाइन? ठिक छ, किनकि यो एक धेरै सजिलो र शान्त काम हो कि तपाइँले चाँडै नै राम्रो अतिरिक्त पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं निर्णय गर्नुहोस् जब तपाईं तपाईंको पैसा निकाल्न चाहनुहुन्छ र तपाईं कति फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ। यो विद्यार्थीहरूको लागि उत्तम छ! यो सर्वेक्षणबाट मात्र पूर्ण आम्दानी कमाउन पर्याप्त छैन तर यो एकदम उत्कृष्ट अतिरिक्त समर्थन हो। Ebuno को एक सक्रिय उपयोगकर्ता को लागी सजिलै SEK 1500 एक दिन 10-30 मिनेट खर्च गरेर कमाउन सक्छ।
पैसा कसरी पाउने?
तपाइँ तपाइँ PayPal मा कमाई र तपाइँको PayPal बाट कमाएको पैसा फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ, तपाइँको बैंक खातामा फिर्ता लिन यो सजिलो छ र यसले केहि दिन लिन सक्दछ। भविष्यमा हामी भुक्तानहरू ह्यान्डल गर्न सक्दछौं बढी तरीकाहरू जस्तै स्विस मार्फत, हाम्रो प्रयोगकर्ताहरूको लागि सजिलो बनाउन। तपाइँको पैसा प्राप्त गर्न यसले १ हप्ता लिन सक्दछ, तर हामी प्राय: त्यस भन्दा छिटो हुन्छौं।
घरबाट काम गर्ने थप तरिकाहरू
सशुल्क सर्वेक्षणको अतिरिक्त, घरबाट काम गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। उदाहरण को लागी, तपाई चित्रहरु बेच्न सक्नुहुन्छ, सानो कामहरु फाईवर र फ्रीलान्स अनलाईन जस्ता साइटहरुमा अनलाइन तपाईलाई केहि रमाईलो लाग्छ।
धेरै व्यक्तिहरू आफ्नै ब्लग सुरू गर्न ट्र्याकमा जान्छन्, जुन अर्को तरिका हो जुन अनलाईन कामका लागि राम्रो छ। त्यसो भए तपाईले केहि लेख्नु भएको जुन तपाईलाई चाख लाग्दो छ र तपाइँको वेबसाइटमा विज्ञापन ब्यानर राख्नुहुन्छ। यदि तपाइँ तपाइँको ब्लग कसरी खोल्ने थाहा छैन भने, म तपाइँलाई wix वा साप्ताहिक रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गर्न सक्छु। यदि तपाईं थोरै उन्नत हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नै डोमेन किन्न सक्नुहुनेछ र वर्डप्रेस प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।